MUUQAAL: Madaxwayne Geelle oo Baarlamaanka Somalia Khudbad Qiiro leh u Jeediyey | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Madaxwayne Geelle oo Baarlamaanka Somalia Khudbad Qiiro leh u Jeediyey
Mar 17, 2019 - 7 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Khudbad dhinacyo badan taabanaysa Xarunta akademiyada booliska Jen. Kaahiye (Iskoolo Buluusiyo) ee magaalada Muqdisho ugu Jeediyey Xildhibaanada labada gole ee dowladda Soomaaliya.
Madaxwayne Geelle ayaa ka hadlay Muhiimadda ay leedahay Dawladnimada, Wadashaqaynta Goleyaasha Dawladda iyo Xildhibaanadu ay Shacabka ka Turjumaan Baahidooda dhabta ah.
Geelle ayaa ku dheeraaday Masuuliyadda saaran Hogaanka Bulshadu ay doortay, Wuxuuna Xildhibaanada labada Gole kula dar-daarmay inay u Tanaasulaan markasta oo ay Hormiyaraan danta Qaranka, Halka ay ka Fekeri lahaayeen Dan-gaar ah.
Aroortii inta aysan shaqada gelin ayuu ku Booriyey inay Xasuustaan Dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed, Kuwa duruufaysan iy Kuwa Barakacay oo Ka sugaya inay wax u Qabato Dawaldoodu.
Khudbadda madaxwayne Geelle ayaa la filayaa inay meesha ka saarto Mad-madow Mudooyinkii dambe ku dhexjiray Labada Golle ee Baarlamaanka.
Aabihii dilaalka geeska afrika.jabuuti ayuu soo cunay hadana soomaliya ayuu rabaa inuu ku daro.
Uhuraha cadowga ah ayaa uga asxaan badan soomaalida.
50 sano hadaad la joogto sharci kuuma ogola.
Waa cadow taag la’ balse aan la dareensanayn.
Soomaalidu wey iska dabo ordayaan haday arkaan soomaali ma fiirinayaan shaqada uu hayo.
Askartii 50 sano ka hor caawinaada loogu diray intooda badan wali sharci lama siinin iyaga oo la fiirinayo qabiilka ay yihiin.
Heer waxay gaadheen ciisaha iyo godubiirsiga ay u kala abtiriyaan.
Ku darsoo godubiisigu waa nimankii u soo halgamay jabuuti iska daa soomaalida kaloo.
Ali zubeer baan ka maqli jiray qof war haya ha kuu warramo.
Madaxweyne Geele wadani Soomaaliyeed.
Odaygani waa ninki somaaliya u sameeyey 4,5 ilaahader
Mashaakilki laga dhaxlay xal lowaayey wuxu jecelyahay
Inaanay somaaliya dib cagaheeda isugu taagin
Isir nacayba lafta iyo ruga kagalay muxu modaya inaan
La fahmayn sxb sifiicanba lagula socdaa somaaliyana
Mar uunbay cagaheeda isku taagidonta insha alaah WBT
MURTTI SOMALIYEED BAA DHAHDA:-
(SHIFO LAGALA QUUSEY!!!).
GEELOOW WAANO LAGALA QUUSEY KUWAAS,MEEL BAA LOOGA YEER-YEERAYAA!!.
Kalahage & Khaatumo haanoolaatoo, adeerayaal waxaan u malayna inaad mardhow ku soo biirteen Barxadda faallada siyaasadda Somali ee tartiibsada. *Akhyaaray weligiin ma aragteen nin madaxweyne Dal ah oo Dal kale dhibaatada haysata daraadeed ILLINI uga qubatay? anigu waan arkay C.C.Geelle IDINKUNA?. *Waxba terimayso anaa ooyay LAAKIIN waxaa muhima inaan lagu abaal furin ninkii ku garab taagnaa markaad liidatay. WBT
Khaatumo haanoolaatoo adeer, 4.5 aaa lagu aflaxay waageedi Laakin hadda waxaa loo baahanyahay in loo gudbo axsaab. WBT